तपाईंको लागि आजको दिन कस्तो रहनेछ ? २०७७ फागुन-१३ गते, बिहीवार - Jagaran Post
तपाईंको लागि आजको दिन कस्तो रहनेछ ? २०७७ फागुन-१३ गते, बिहीवार
जागरणपोस्ट १३ फाल्गुन २०७७, बिहीबार ०७:५५
अवसर र व्यवधानका बीचबाट कर्मफल हातपार्न सफल भइनेछ। अरूको विश्वास जित्न केही समय लाग्नेछ। तापनि प्रयत्न गर्दा दिगो फाइदा हुने काम हातलागी हुनेछ। सहयोगीहरूले साथ दिनाले चिताएका काम सम्पादन हुनेछन्। मिहिनेतले राम्रो परिणाम प्राप्त हुनेछ। भौतिक साधन जुट्नेछन्। उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा हुनेछ। प्रतिस्पर्धीबाट जोगिएर काम गर्नुहोला।
तपाईंको लागि आजको दिन कस्तो रहनेछ ? वि.सं.
नेपाली कांग्रेसका ऐतिहासिक योद्धासंग अन्तक्रिया
तपाईंको लागि आजको दिन कस्तो रहनेछ ? २०७७
दिनको शुरूवात गर्नुहोस् आफ्नो राशिफलको साथ : वि.सं.